दीपक मनाङेको फिल्ममा सौगात र सृष्टि बने प्रेम जोडी | Ratopati
काठमाडौं–दीपक मनाङेको लगानी बन्न लागेको फिल्म ‘पोई पर्यो काले’ मा प्रेमजोडीको रुपमा सृष्टि श्रेष्ठ र सौगात मल्ल एकसाथ देखिने भएका छन् ।
निर्देशक शिशिर राणाले केही दिन अगाडि फिल्मका लागि सौगातलाई अनुबन्धित गरेका थिए, भने अहिले सृष्टिलाई पनि फाइनल गरेका हुन् ।
फिल्ममा सौगात र सृष्टिको एक अर्काको अपोजिट भूमिकामा रहने वा नरहनेबारे निर्देशक राणाले केही खुलाउन चाहेनन् । जेठबाट छायांकनका लागि फ्लोरमा निस्किने फिल्मका प्रस्तुतकर्ता श्यामबहादुर थापा हुन् । फिल्ममा रघु परियार र किरण नेपाली कार्यकारी निर्माता रहेका छन् ।
अभिनेता सौगात पछिल्लो समय धमाधम फिल्म साइन गरिरहेका छन् । शिशिर राणाको फिल्म पछि उनले शुक्रबार सुवर्ण थापाको निर्देशन रहने फिल्म ‘राम राम’ पनि खेल्ने भएका छन् । सौगात सो टिमसँग शुक्रबार जोडिएका हुन् ।
‘सेल्फी किङ’को फस्टलुकमा विपिनको आँखामा गाजल र ओठमा लिपिस्टिक किन ?
उषाले ल्याइन् ‘तिमी पाएर खुल्यो’
टाइटानिककी गायिका सेलिन डियोनको नीजि विमान दुर्घटनामा मृत्यु ? यस्तो छ वास्तविकता